အတတ်ပညာ China High Density Polyethylene HDPE Pipe Polypipe သောက်သုံးရေပေးဝေရေး ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
High Density Polyethylene HDPE Pipe Polypipe သည် သောက်သုံးရေပေးဝေခြင်း
1. အမည်- HDPE သောက်ရေပေးဝေမှု
2. အရွယ်အစား: dn20-1600mm
3. စံသတ်မှတ်ချက်- ISO4427/ EN12201
4. ပစ္စည်း- 100% Virgin PE100 သို့မဟုတ် PE80
5. ဖိအား- PN4-PN25 SDR33-SDR7.4
100% Virgin Material PE100 & PE80
High Density Polyethylene HDPE Pipe Polypipe သည် သောက်သုံးရေပေးဝေခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
လက်မှတ်- WRAS၊ ISO၊ CE၊ BV၊ SGS
ရရှိနိုင်သောအရောင်များ- အပြာရောင်အကွက်များ၊ အပြာရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်အရ အနက်ရောင်။
Pipe dia.20mm-63mm သည် 50m/100m အရှည်ရှိသော ကွိုင်တွင်ရှိနိုင်သည်။
ပိုက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အလျား 5.8 မီတာ / 11.8 မီတာရှိသော ဘားများတွင် > 63 မီလီမီတာ
ထုတ်လုပ်မှုဦးဆောင်အချိန်: မှာယူမှုအရေအတွက်ပေါ် မူတည်.
သာမာန်အားဖြင့် ပေ 20 ကွန်တိန်နာအတွက်5ရက်၊ ပေ 40 ကွန်တိန်နာအတွက် 10 ရက်ဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့နိုင်မှု- 100000 တန်/နှစ်
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း- T/T၊ L/C၊ အနောက်ပြည်ထောင်စု
ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်း- EXW၊ FOB၊ CFR၊ CIF၊ DDU
ရေပေးဝေရန်အတွက် HDPE ပိုက်ကို အသုံးပြုခြင်း။
Oxidation induction အချိန် (200 ℃) မိနစ်
ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု 1. (ပိုက်သည် 3.5GJ/m2 နှင့် ညီမျှသော အိုမင်းခြင်းစွမ်းအင်ကို လက်ခံပြီးနောက်)
80 ℃ static hydraulic strength (165h)
Tensile breaking strength ၊
Static hydraulic strength
1) 20 ℃၊ လည်ပတ်ဖိစီးမှု 12.4Mpa၊ 100 နာရီ၊ ကွဲထွက်ခြင်းမရှိ၊
2) 80 ℃၊ လည်ပတ်ဖိစီးမှု 5.5Mpa၊ 165 နာရီ၊ ချိုးဖျက်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိပါ။
3) 80 ℃၊ သံသရာဖိစီးမှု 5.0Mpa၊ 1000h၊ ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိ၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိပါ။
MFR (190 ℃၊5ကီလိုဂရမ်၊) g/10 မိနစ်
HDPE ပိုက်များ၊ Polyethylene (PE Pipe) များကို အစောပိုင်းနည်းပညာများ၏ ပြင်းထန်မှုအရ အမျိုးအစားခွဲထားသည်
PN4-PN25 နှင့် လိုချင်သော အချင်းနှင့် အရွယ်အစားကို ထုတ်လုပ်နိုင်သော HDPE ပိုက်ဖိအားအတန်းများ။
HDPE ပိုက်စနစ်သည် စမ်းသပ်မှုများစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ယနေ့ခေတ် အသုံးများဆုံး ပိုက်တစ်ခု။
စျေးသက်သာခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချိတ်ဆက်မှုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းနှင့် အတော်လေးအသုံးဝင်သော HDPE ပိုက်စနစ်များ။
HDPE ပိုက်များသည် 50 နှစ်လယ်ပိုင်းကတည်းကရှိခဲ့သည်။HDPE ပိုက်များသည် ဖောက်သည်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာအတိုင်ပင်ခံများက အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ပိုက်ပြဿနာအများစုအတွက် ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပြီး ရေနှင့်ဓာတ်ငွေ့မှ ဖိအားများနှင့် ဖိအားမဟုတ်သော အသုံးချမှုများအတွက် စံပြပိုက်ပစ္စည်းအဖြစ် ပိုက်များ၊ ရေဆိုးမြောင်းများနှင့် မျက်နှာပြင်ရေနုတ်မြောင်းများ အသစ်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပရောဂျက်များအတွက် စံပြပိုက်များ။
အသုံးချမှုနယ်ပယ်- မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသအတွက် သောက်သုံးရေပေးဝေရေးပိုက်၊ ဓာတု၊ ဓာတုဖိုက်ဘာ၊ အစားအစာ၊ သစ်တောနှင့် သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စွန့်ပစ်ရေနုတ်မြောင်းပိုက်၊ သတ္တုတွင်းနယ်ပယ်အတွက် သတ္တုတွင်း slurry သွယ်တန်းသည့်ပိုက်။
3. အစိတ်အပိုင်းများကို အပူပေးပါ။
1.ချိတ်ဆက်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းများကို လုံခြုံစွာ ချိတ်ဆွဲပါ။
2. ပိုက်အဆုံးကို မျက်နှာမူပါ။
3. ပိုက်ပရိုဖိုင်ကို ညှိပါ။
4. ပိုက်မျက်နှာပြင်များ အရည်ပျော်ပါ။
5. ပရိုဖိုင်နှစ်ခုကို အတူတကွ ချိတ်ဆက်ပါ။
2. ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်(များ) ကို ချိတ်ပါ
4. အအေးခံပြီး လက်ကိုင်များကို ဖယ်ရှားပါ။
Compression Fittings Joint များ၊
beveler tool ဖြင့် ပိုက်ကို ချုံ့ပါ။
B ခန္ဒာကိုယ်မှ ဖယ်ထုတ်ပြီး လက်စွပ်ကို အနားပေးကာ O-ring နှင့် clip ring သည် သင့်လျော်သော အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
C လက်စွပ်ကို တင်းကျပ်ပြီး ပိုက်အဆုံးကို ထည့်ပါ။ ပိုက် O-ring ကို ကျော်လွန်ပြီး ရပ်တန့်သည်အထိ တပ်ဆင်ပါ
ဃ လက်စွပ်ကို ကြိုး/ကွင်းဆက် wrench ဖြင့် ထပ်၍တင်းကျပ်ခြင်းမရှိစေရန် လက်ကို တင်းကျပ်ပါ။
SI NO ပစ္စည်းဥစ္စာ ယူနစ် လိုအပ်ချက် စမ်းသပ်မှုဘောင်များ သမ္ဘာနည်းလမ်း
1 သိပ်သည်းဆ ကီလိုဂရမ်/မီတာ³ 930 (အခြေခံအစေး) ကျော်၊ 190 ℃,5ကီလိုဂရမ် GB/T1033-1986 ၏ D နည်းလမ်း၊ စမ်းသပ်ပြင်ဆင်မှုသည် GB/T1845.1-1989 : 3.3.1 အရ
2 အရည်ပျော်နှုန်း (MFR) g/10 မိနစ် 0.2-1.4၊ နှင့် အများဆုံးသွေဖည်မှုသည် ရောနှော၏အမည်ခံတန်ဖိုးထက် မကျော်လွန်သင့်ပါ။ 190 ℃,5ကီလိုဂရမ် GB/T3682-2000
3 အပူဓာတ်တည်ငြိမ်မှု (ဓာတ်တိုးဝင်ရောက်ချိန်) မိ 20 ကျော် 200 ℃ GB/T17391-1998
4 မတည်ငြိမ်သော အကြောင်းအရာ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် ၃၅၀ အောက် နောက်ဆက်တွဲ C
5 အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု ခ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ် ၃၀၀ အောက် ASTMD4019:1994a
6 ကာဗွန်အနက်ရောင်ပါဝင်မှု c % 2.0-2.5 GB/T13021-1991
7 ကာဗွန်အနက်ရောင် ပျံ့နှံ့မှု c အတန်း ၃ အောက် GB/T18251-2000
8 ရောင်စုံပျံ့လွင့်မှု ဃ အတန်း ၃ အောက် GB/T18251-2000
9 ဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ h 20 ကျော် 80 ℃၊ 2Mpa(ring stress) နောက်ဆက်တွဲ D
ဝက်ဝံ fast crack ပြန့်ပွားခြင်း (RCP)
10 အရွယ်အစားအပြည့်အစုံ (FS) စမ်းသပ်မှု : Dn ≥250mmor S4 စမ်းသပ်မှု : ပိုက်နံရံအထူ ≥15mm MpaMpa အရွယ်အစားစမ်းသပ်မှု၏ အရေးကြီးသောဖိအား အပြည့်အစုံ Pc.fs ≥ 1.5XMOP0℃0℃ ISO13478:1997GB/T19280-2003
11 ဝက်ဝံကွဲအက်ကွဲထွက်ခြင်း (En≥5mm) h ၁၆၅ 8 ℃, 0.8Mpa (စမ်းသပ်မှုဖိအား)f 80 ℃, 0.92Mpa (စမ်းသပ်မှုဖိအား)g GB/T18476-2001
aအနက်ရောင်မဟုတ်သော အရောအနှောများသည် ဇယား6ပါ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ bရေပါဝင်မှုကို တိုင်းတာသည်။တိုင်းတာထားသော volatiles များသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတွင်၊ ရေပါဝင်မှုသည် တိုင်းတာခြင်းရလဒ်ဖြစ်သင့်သည်။ cအနက်ရောင် ရောစပ်ခြင်းအတွက်သာ လိမ်းပါ။
dအနက်ရောင်မဟုတ်သော ရောနှောကိုသာ အသုံးပြုပါ။
eS4 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက၊ သင်သည် နောက်ဆုံးအခြေခံအဖြစ် full-size စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ပြန်လည်စမ်းသပ်ရန်အတွက် full-size စမ်းသပ်ချက်ကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။
fPE80၊ SDR11 စမ်းသပ်မှုဘောင်များ
gPE100၊ SDR11 စမ်းသပ်မှုဘောင်များ
HDPE ပိုက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်း။
ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင် ခေတ်မီသော ပိုက်လိုင်းများ ထုတ်လုပ်သည့် အစုံ ၁၀၀ ကျော်၊ အံဝင်ခွင်ကျ ထုတ်လုပ်မှု စက်ကိရိယာ အစုံ ၂၀၀ ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏသည် တန်ချိန် 100,000 ကျော်ရှိသည်။၎င်း၏ပင်မတွင် ရေ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သောင်တူးခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်စနစ် ၆ ခု၊ စီးရီး 20 ကျော်နှင့် သတ်မှတ်ချက်ပေါင်း 7000 ကျော် ပါဝင်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် စက်ရုံစစ်ဆေးရေး-Hydrostatic စမ်းသပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001-2008၊ WRAS၊ BV၊ SGS၊ CE စသည်တို့ကို ထောက်ခံချက်ပေးနိုင်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးကို ဖိအား-တင်းကျပ်စွာ ပေါက်ကွဲစမ်းသပ်မှု၊ ရှည်လျားကျုံ့မှုနှုန်းစမ်းသပ်မှု၊ အမြန်ဖိစီးမှုအက်ကွဲခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု၊ ဆန့်နိုင်အားစမ်းသပ်မှုနှင့် အရည်ပျော်မှုအညွှန်းကိန်းစမ်းသပ်မှုတို့ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးသည် ကုန်ကြမ်းမှကုန်ချောအထိ စံချိန်စံညွှန်းများ အပြည့်အဝရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။ .
ယခင်- အမြန်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် တရုတ်လက်ကား Saddle Clamp ပိုက်ဆက်စက်ရုံများ - ဆည်မြောင်း 20 - 110 MM မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ PP Fitting Tee - CHUANGRONG
နောက်တစ်ခု: 20-110mm Socket Joint Fusion HDPE Stop Valve EN 12201-3:2011 Executive Standard
Hdpe ပိုက် ပေးသွင်းသူများ
Hdpe ပိုက်များ ထုတ်လုပ်သူများ
Hdpe Polyethylene ပိုက်
မြင့်မားသောတိကျမှု PE100 PN16 Hdpe Poly Pipe စိတ်ကြိုက်...
ရေပေးဝေရန်အတွက် PE100 Hdpe ပိုက် Black Hdpe Tub...
54mm 63mm 75mm Diameter Double Protection ဖေပီး...
ကြီးမားသောအရွယ်အစား PN16 PE100 DN1200 Hdpe ရေပိုက်၊ ...
89mm100mm HDPE High Density Polyethylene ပိုက် M...
HDPE ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ PE Bracket Cage ငါးများအတွက်...